I-Obeer ingumhlinzeki odume kakhulu futhi ohamba phambili wemishini yokuphekela ubhiya eChina, sigxila ebangeni eligcwele lenqubo yonke yokupheka, okubandakanya uhlelo lokuphekela ubhiya, imishini yokwenza iwayini nomugqa wokukhiqiza izithelo.
Isitshalo sokukhiqiza sihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-8000, enama-workshops amane, umshini wokushisela igesi we-argon, umshini wokupholisha okuzenzakalelayo, i-uncoiler ezenzakalelayo, umshini wokugoba, imishini ye-welding, njll.Iqinisekiswe ngokungenisa ngaphakathi nokusekela okulungile, ithole i-ISO futhi Isitifiketi se-CE, ngaphezu kuka-10 unjiniyela, umhloli kanye nompheki we-brewmaster babhaliswa.
Inkampani yakwa-Obeer igcizelela umgomo "ubungcweti benza ukubaluleka, insizakalo yenza ikusasa", landela umgomo wesevisi "wemininingwane elingana nekhwalithi", yenza umzamo omkhulu ekusunguleni imodeli yokuphatha neyensizakalo esekela kwimikhiqizo kanye nobuchwepheshe inzuzo. Siphikelela ekusebenzeni nasekuthuthukiseni endaweni yobungcweti, sizama konke okusemandleni ethu ukusiza amaklayenti ukuthi awine inani elihle kakhulu.
Ukuhlangabezana nezidingo eziphakeme kwimishini nangekhwalithi yesevisi, inkampani ye-Obeer idlulise isitifiketi sekhwalithi ye-ISO9001: 2008 kanye nokuhlolwa kwesitifiketi se-CE emakethe yaseYurophu naseMelika.
Ngokusekelwe kwisisekelo "sekhwalithi njengokuyisisekelo", inkampani igcina ubuchwepheshe bokukhiqiza imishini yobhiya, idizayina futhi ikhiqize imishini yobhiya efanele amakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe; imishini iyinhle ekusebenzeni, ihle kakhulu ekusebenzeni futhi kulula ukuyisebenzisa, futhi iyindlela yokuqala yokwenza ubhiya osezingeni eliphakeme. Sinabathuthukisi besayensi nabezobuchwepheshe abasezingeni lokuqala, ubuchwepheshe bokuphisa besigaba sokuqala, ochwepheshe bokukhiqiza abangochwepheshe, imishini yokucubungula esezingeni eliphakeme, basungule insizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva kokuthengisa kanye nohlelo lokuqinisekisa, futhi sinamakhono amahle kakhulu wokuhlinzekwa kwemishini nensizakalo. Ngeminyaka yokukhiqiza nokusebenza, inkampani izabalazela ukuhlinzeka ngamaphrojekthi we-turnkey, ithole ukuthenga ngakunye, futhi ikunikeze uhla oluphelele lwezinsizakalo.
Uyemukelwa wonke umngani kabhiya asivakashele.